Archive du 20-juin-2022
Tsy mahatan-damba e !
Raha misy zavatra tian’izao fitondrana izao indrindra angamba dia ny resaka kifetifety hanaronana ny fahasahiranan’ny vahoaka.
Afera maloto tao amin’ny Airmad Nampanginina noho ny tombotsoa politika ?
Nangina tsy nandresana tohiny firy intsony indray ilay raharaha Air Madagascar nampifanjinja ny Minisitry ny fitaterana Atoa Roland Ranjatoelina sy ny Filohan’ny Filankevi-pitantanana lefitr’io Kaompania io izay novonoina sy
ALASORA Misy sekoly tsy ara-dalàna maka vola amin’ireo raiamandreny
Tena mitady izay fomba rehetra mba hahazoam-bola mihitsy ireo mpisoloky eto amintsika amin’izao.
Mirifatra indray ny covid-19 2 maty, 324 ny tranga vaovao
Olona 2 maty, 324 ny tranga vaovao ! Io indray ny tarehimarika vaovao mikasika ny fivoaran’ny coronavirus tao anatin’ny herinandron’ny 11-17 jona teeo.
Hetsika ara-pinoana Alahady Taratry ny sary politika 2023…
Hetsika ara-pivavahana roa samihafa no nanamarika ny andron’ny omaly alahady 19 jona 2022 teto Antananarivo Renivohitra.
Fahatapahan-jiro diso tafahoatra Miantso ny vahoaka hitsangana ny mponin’i Soavimasoandro
Ny fahatapahan-jiro matetika no anisan’ny tena mampitaraina fatratra ireo mponina eto an-drenivohitra sy ny manodidina.
Mpitondra Malagasy Ataon'ny olona tsakin'ady fotsiny anaty fifampiraharahana
Tonga amin’ilay fomba fiteny hoe: tsy ambony tsy ambany tahaka ny lohalik’alika ny Fanjakana ankehitriny amin’ny resaka adihevitra sy fifandresen-dahatra amin’ny mpamatsy vola.
Filoha Rajoelina Feno manam-pahaizana manodidina azy, saingy....
Fomba firesaka hoentin’ireo te hanadio sy hiaro mafy ny Filoha ankehitriny amin’ny tsy fahombiazany ny hoe: Atoa Andry Rajoelina tsara sy te hanao zavatra ihany fa ireo manodidina azy mihitsy ny ratsy.
ZAP Ampitatafika Miisa 1.335 ireo mpiadina hiatrika ny CEPE
Efa mipetraka sy milamindamina avokoa ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana CEPE ho an’ny ZAP Ampitatafika. Raha araka ny fanazavan-dRtoa Hanitriniala Tahiry,
Delestazin’ny Jirama Hay azo fehezina rehefa mandrahona ny Filoha ?
Tsapa sy tsikaritra ho tsy nisy loatra na somary nalefaka ny fahatapahan-jiro teto Antananarivo sy ny manodidina ny faran’ny herinandro teo.
Dr Fidy Bariniaina “Mety hisy andiany fahaefatra ny Covid 19”
Mety hisy andiany fahaefatra raha ny vinavinan’ny mpitsabo ny valan’aretina Covid 19 eto amintsika. Eo amin’ny sehatry ny fitsaboana mantsy dia tsy misy izany hoe : 2+2 dia tsy maintsy 4 izany.
Morondava Trano manarapenitra efa ho 1000 tapitrisa ariary nitriatra
Nitriatra sy vaky ary an-dalam-pirodanana ny Tranoben’ny serasera sy ny Kolontsaina ao Morondava Faritra Menabe.
Amboatavo Itaosy Nahitana fatin-jazakely tsy nisy lohany intsony
Zaza iray manodidina ny 2 taona eo ho eo no hita faty tsy nisy lohany intsony teny Amboatavo Itaosy, kaominina Itaosy Atsimondrano ny faran’ny herinandro teo raha araka ny loharanom-baovao azo.
Tanoran’i Talatamaty Tena mamiratra amin’ny taranja tsipy kanetibe
Tena manana tanora mamiratra amin’ny taranja tsipy kanetibe ny kaominina Talatamaty, distrikan’Ambohidratrimo.
Tsiroanomandidy Olona 8 no notiliana ny VIH/SIDA
Nifarana omaly alahady rehefa naharitra 3 andro ny varavarana misokatra sy fitsaboana maimaimpoana notanterahina tao amin'ny hopitalim-paritra Bongolava ao Tsiroanomandidy.